Izindaba - Kwenzekani uma uwoyela wokubacindezela weyunithi yamandla wokubacindezela ukhethwe ngokungafanele
Sonke siyazi ukuthi amandla kagesi wokubacindezela ayalingana nomzimba womuntu, futhi uwoyela okhethekile wokubacindezela wohlelo lwamandla kagesi wokubacindezela ulingana negazi lomuntu. Uma kunenkinga ngegazi, kuzoletha izimo eziningi. Namuhla i-Huai'an Power Unit izokutshela ukuthi kwenzekani uma uwoyela wokubacindezela weyunithi yamandla wokubacindezela ungakhethwanga kahle?
Njengegazi lomuntu, uma igazi linenkinga, khona-ke umzimba womuntu uzosebenza kabi, futhi uwoyela wokubacindezela uwoyela wokubacindezela uzodala ukwehluleka okuhlukahlukene ohlelweni lokulawula umfutholuketshezi lomkhiqizo we-hydraulic unit unit. Ake sibheke amacala alandelayo kuqala!
I-viscosity kawoyela wokubacindezela weyunithi yamandla wokubacindezela ayikho ebangeni elifanele. Isibonelo, uhlelo lwe-hydraulic luyadingeka ukuthi lusetshenziswe ngaphansi kwesimo se-20-70 degrees Celsius. Kodwa-ke, uma kukhethwa uwoyela we-VG46 wokubacindezela onenkomba ye-viscosity ka-100, u-oyela use-The kinematic viscosity at 20 degrees Celsius is 1 34.6 cST.
Uma uhlelo lwe-hydraulic lweyunithi yamandla we-hydraulic lisebenzisa i-gas-liquid eqondile yokuhlangana, amanzi ne-glycol akunakusetshenziswa.
Uma kuqhathaniswa nowoyela wamaminerali, uwoyela wokwenziwa owenziwe ngoketshezi unabantu abaningi. Uwoyela wokukhipha oqukethe amanzi awugcini nje ngokuba nobuningi obuphakeme kepha futhi unomphunga ophakeme, ozokhiqiza ukumelana okukhulu nokugeleza kukawoyela, ngakho-ke ukuze ugweme iphampu elibangela ukuqhuma nokudlidliza, kufanele ugweme ukusetshenziswa kwamafutha anjalo.
Okokusebenza okuncane kwe-hydraulic okusetshenziswa ngaphansi kwezimo zokushintsha kwamazinga okushisa amakhulu, uma uhla lokushintsha kwe-viscosity luyizikhathi ezi-3, ukuvuza kuzophinde kushintshe ama-3, okuzoba nomthelela omkhulu ohlelweni lokuhamba kancane lwe-hydraulic.
Ngakho-ke, umkhiqizi weyunithi yamandla ukhumbuza wonke umuntu ukuthi lapho ukhetha uwoyela wokubacindezela qaphela ukukhetha ngokuya ngezimo zakho zangempela zokusebenza ukuvimbela zonke izinhlobo zomonakalo ohlelweni lokubacindezela.
Isikhathi Iposi: Nov-17-2020